တရားအဆုံးအမများ Archives - Page9of 10 - Myanmar Express
မကောင်းသော ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်တွေ သောင်းကျန်းလာတယ်။
တန်ဖိုးရှိလွန်းလှတဲ့“ သာဓု ခေါ်ဆိုရခြင်း အကျိုး ”အကြောင်း
ခုခေတ်လူတွေ ခဏခဏ ‘သာဓု’ခေါ်နေကြတာ
ဘာလို့ မရတာတုန်းလို့ မေးကောင်း မေးလိမ့်မယ်။
မနက်မိုးလင်းတိုင်း ရွတ်ဖက်သင့်တဲ့ လာဘ်နိုးဂါထာတော်
အဲ့တော့ လာဘ်လာဘ ငွေကြေးတွေက ဝင်သင့်သလောက်မဝင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တာကြောင့် ဒီလာဘ်နှိုးဂါထာလေးက်ိုဖော်ထုပ်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
နေ့စဉ်နေ့စဉ် ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါးကို ပွားများရတယ်။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပွားများရင် ဘုရားဓာတ်တွေ တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ် ဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းလာတယ်။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းတော့ ဘုရားရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး အာ
ရဟန်းတော် များ နေ့လွဲညစာ မစားရခြင်းအကြောင်း
ဖားအောက်ဆရာတော်ကြီး မိန့် တဲ့ ” အနာရောဂါထူပြောရတဲ့ အကြောင်းအရင်း “
နောက်တစ်ခု ဒုတိယအစုံ အနေနှင့် သူက ဘာမေးခွန်း မေးခဲ့သလဲ? ဒီလူ့ပြည် လူ့လောကမှာ တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘယ်လိုရှိကြသလဲ? အနာရောဂါ သိပ်ပြီးတော့ ထူပြောကြတယ်၊ တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ ကျန်းမာရေး သိပ်ကောင်းကြတယ်၊ အနာရောဂါ ကင်းကြတယ်၊ ဘ
ဘုရား ၊တရား လုပ်ခြင်း၏ လက်ငင်း အကျိုးကျေးဇူး